သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှု - Panasonic
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည် ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးပါသည်။ ဤ” ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထိန်းသိမ်းမှု” မှ Panasonic Asia Pacific Pte., Ltd အနေဖြင့် ပင်မကုမ္ပဏီ၊ ကုမ္ပဏီခွဲများနှင့် အကျိုးတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်သူများထံမှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းသွားမည့်အကြောင်းကို ရှင်းပြထားပါသည်။ https://www.panasonic.com.mm and https://panasonic.com/mm (“Web Site”). မှရရှိသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Panasonic မှ လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
“ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်” ဆိုသည်မှာ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သမျှ အချက်အလက်အားလုံး(ကျွန်ုပ်တို့ Website ကို အသုံးပြု၍ ရရှိလာသော သင့်နာမည်၊ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ မေးလ်လိပ်စာ၊ လျှိဝှက်နံပါတ်နှင့် အင်တာနက် လိပ်စာနံပါတ်တို့)ပါဝင်သည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထိန်းသိမ်းခြင်းတွင် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သင့် ကျွန်ုပ်တို့ Website ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
သင့်ကို ပိုမိုအကူအညီပေးရန်အတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို အချိန်တိုင်း အဆင်မြှင့်ပြင်ဆင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်လည်း Web စာမျက်နှာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
1.1 သင် Website ကို အသုံးပြုရာတွင် ရရှိမည့် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ သိမ်းဆည်းပါမည်။:
(a) သင် Website ကို အသုံးပြုရာတွင် Web အသေးစိတ်အချက်အလက်စစ်တမ်းများ
(b) (i)ပစ္စည်းအတွက် စာရင်းသွင်းရာတွင်၊ (ii)ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် စာရင်းသွင်းရာတွင်၊ (iii)အွန်လိုင်းပရိုမိုရှင်း၊ စစ်တမ်းများနှင့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ရာတွင်၊ (iv)ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အချက်အလက်တောင်းဆိုခြင်း(သို့)ဆက်သွယ်ခြင်း(သို့)အကြံပြုချက်ပေးပို့ခြင်း(သို့) မေးခွန်းများမေးမြန်းရာတွင်၊(iv) Web site ကို အသုံးပြုပြီး အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် ရရှိမည့်အချက်အလက်များ၊
1.2 Pabasonic အဖွဲအစည်းမှ(သို့) အခြားသော Third Party များမှ ရရှိသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားပါမည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးသောဆိုင်၊ အေးဂျင့်၊ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များနှင့် ပြန်လည်ရောင်းချသောဆိုင်များမပါဝင်ပါ။
1.3 သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အောက်ပါနေရာများတွင် သုံးစွဲမှုကို ဘဘောတူညီရမည်။
(a) ကျွန်ုပ်တို့ ကြော်ငြာ၊ စာစောင်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် အသုံးပြုခြင်း
(b) သင့်တောင်းဆိုထားသော သုံးစွဲသူထောက်ပံ့မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း;
(c) စစ်တမ်းများ၊ ပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခြင်း;
(d) သင် တောင်းဆိုထားသော ပရိုမိုရှင်းအကြောင်းအရာ၊ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များအကြောင်းပေးပို့ရာတွင် နှင့်
(e) ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျောက်မည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို တားဆီးမည့်နေရာများ
1.4 သင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်ရာတွင် သင့်မှားရေးသည့်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။
2. Cookies နှင့် Passive Tracking
2.1 Cookies ဆိုသည်မှာ သင့်အသုံးပြုသော Browser ထံသို့ data အချက်အလက်များကို ပို့ပေးသောစနစ်ဖြစ်သည်။ သင့် Browser မှ သင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း cookies ကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။ Cookies သည် သင့် Operation System တွင်ပါဝင်သော browser type နှင့် Internet Protocol address တို့ကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။
2.2 Web Site များသည် အချက်အလက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသော cookies ကိုအသုံးပြုပြီး Web Site ကို ပိုမိုအသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သင့်ခွင့်မပြုသော အချက်အလက်များကို Website မှ အသုံးပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
2.3 သင့် အင်တာနက် Browser မှ သင့် cookie တစ်ခုကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ သင်ကို အသုံးပြုခွင့် တောင်းဆိုပါလိမ့်မည်။ သင့်အနေဖြင့် ထို Cookies များကို အသုံးပြုခွင့် မပေးချင်လည်း ရပါသည်။ သို့သော် ထို Cookies များကို အသုံးပြုခွင့်မပေးလိုက်ပါက သင့်အနေဖြင့် Website တွင် လုပ်ဆောင်ချက်အပြည့်အဝရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
3. Access, Correction နှင့် Withdrawal of Consent
3.1 တစ်ဦးချင်းစီအတွက် သင့်တော်မည့်ဟုယူဆထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အချက်အလက်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဥပဒေများအရ ထိမ်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် website ကို တင်ပြထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သတ်၍သိလိုပါက နံပါတ်စဉ် (၉)တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
4. နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ကူးပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်း
4.1 သင်ထံမှ ရရှိသော အချက်အလက်များကို Panasonic ၏ စံစီးပွားရေးဥပဒေသများအရ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ကူးပြောင်းခွင့်ရှိပါသည်။ သင့်အချက်အလက်များကို ဖြည့်ပြီးခြင်းအားဖြင့် သဘောတူညီသည်ဟု မှတ်ယူထားပါသည်။
5.1 သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လုံခြုံမှုရှိစေရန် (သို့) ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းမရှိစေရန် ကျွန်ပ်တို့အနေဖြင့် လိုအပ်သောနေရာများတွင်သာအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
5.2 ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အလုပ်သမားများအနေဖြင့်လည်း ထိန်းသိမ်းထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလုံခြုံမှုသည် အရေးကြီးကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။
5.3 အင်တာနက်အသုံးပြုပါက သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းနေစဉ်တွင် သင့်အနေဖြင့် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် လွဲပြောင်းပေးသော အချက်အလက်များ လုံခြုံရေးအတါက်တော့ အာမမခံပါ။
5.4 သင့်အနေဖြင့် ဤ Wesite တွင် အသုံးပြုထားသော လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့်လည်း တခြားသူများကို လွဲပြောင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။
6. Disclosure နှင့် Retention
6.1 သင်ပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Panasonic၊ ကျွန်ပ်တို့ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တစ်ဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့် အေးဂျင့်များကို လွဲပြောင်းပေးပါမည်။ သို့သော် အခြားသော Third Part များကို အောက်ပါ အကြောင်းပြချက်များမှ လွဲ၍သင့်၏ခွင့်ပြုချက်မရမချင်းလွဲပြောင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။
(a) ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများနှင့် အခြားသော တရားခွင်ကိစ္စရပ်များတွင်လိုအပ်ခြင်း
(b) အစိုးရ၏တောင်းဆိုချက်နှင့် တရားဥပဒေရုံးများမှ သင့်အချက်အလက်များကို တောင်းဆိုခြင်း
(c) လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များနှင့်အခြားသောကိစ္စာများစုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် လိုအပ်ခြင်း
(d) Panasonicနှင့် အခြားသော လုပ်ငန်းခွဲများ၏ မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိခိုက်ခြင်း(သို့)ကာကွယ်ခြင်း(သို့)
(e) Panasonic အလုပ်သမားများနှင့် Third Party များ၏ မူပိုင်ခွင့်နင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
6.2 အထက်ပါအကြောင်းအရာများကြောင့် သင့်အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
7.1 သင်အနေဖြင့် အသက်(၁၈)အောက်ဖြစ်ပါက သင့်မိဘ(သို့)အုပ်ထိန်းသူ၏ အချက်အလက်များကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
8. Third Party Web Site များနှင့် လူမှုကွန်ရက် Site များ
8.1 Website တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကွဲပြားနိုင်သော အခြားသော third party များ၏ link များပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ website တွင် အခြားသော link များပါဝင်လာမှုကြောင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လွဲပြောင်းပေးလိုက်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ သင့်ပေးလိုက်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသည် ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထိန်းသိမ်းခြင်းမူဝါဒတွင်အကျုံးမဝင်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် အခြားသော third party များ၏ website သို့ရောက်ရှိပါက ထို site များ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
8.2 Web Site တွင် သင့်အချက်အလက်များကို လူမှုကွန်ရက်များမှ တစ်ဆင့် မျှဝေပေးနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်ပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး သင့်အချက်အလက်များကို မျှဝေ(သို့)သိမ်းဆည်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ သင့်အသုံးပြုလိုက်သော လူမှုကွန်ရက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ထို့ site များမှ အသုံးပြုသော သင့်အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းထားသည့်အကြောင်းကို နားလည်ဘဘောပေါက်နိုင်မည်။
8.3 လူမှုကွန်ရက် Site များနှင့် Third Party Website များမှ အသုံးပြုသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ စည်းမျဉ်းဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းမရှိပါ။
9. ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ
9.1 သိလိုသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အောက်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်း email လိပ်စာသို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။: customerservice@mm.panasonic.com
10.1 ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထိန်းသိမ်းခြင်းမူဝါဒသည် သင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားပုံ ကိုဖော်ပြထားသော မူဝါဒဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်လည်း Panasonic မှ အဖွဲ့ဝင်(သို့) အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ဤ မူဝါဒများကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
11. ကျွန်ုပ်တို့ ၀ဘ်ဆိုက်တွင်ရှိသော တတိယပါတီ အင်္ဂါရပ်များ
ကျွန်ုပ်တို့ ၀ဘ်ဆိုက်များတွင် တတိယပါတီ များမှ သူတို့ရဲ့ API များမှတစ်ဆင့် ထည့်သွင်းထားသော ဗီဒီယိုကဲ့သို့သော အင်္ဂါရပ်များပါဝင်ပါသည်။ ၄င်းတို့၏ API များကိုလည်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာအသုံးပြုထားပါသည်။ ထိုအင်္ဂါရပ်များကို သင်အသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်ပြီး သင်၏သတင်းအချက်အလက်များအား ပံ့ပိုးသူများဆီသို့ မျှဝေပါလိမ့်မည်။ ထိုအင်္ဂါရပ်များ၏ သတ်မှတ်ချက်များကိုသိရှိလိုပါက ပံ့ပိုးသူများ၏ ၀ဘ်ဆိုက်များတွင် သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ၀ဘ်ဆိုက်များတွင် ဗီဒီယိုများပြသရန်အတွက် YouTube API ၀န်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သတ်၍ဖြစ်စေ ၀န်ဆောင်မှု အင်္ဂါရပ်များနှင့်ပတ်သတ်၍ဖြစ်စေ နောက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များကို YouTube ၀န်ဆောင်မှုသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် Google ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ တွင် သင်၏အချက်အလက်များ အသုံးပြုမှုကို လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။